कक्षा–१२ का विद्यार्थीलाई निकास देऊ ! - Khabarshala कक्षा–१२ का विद्यार्थीलाई निकास देऊ ! - Khabarshala
प्रेमनारायण भुसाल | भदौ १७, २०७७
यी दुई नतिजाका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी विद्यालयको विगत तीन वर्षको कक्षा–१२ को नतिजाको तुलनात्मक अध्ययन गरी अन्तिम नतिजा तयार गर्न सकिन्छ।
आंशिक विवाद र नतिजा पुनःप्रकाशन गर्नु परे पनि अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड क्याम्ब्रिजले कक्षा–१२ समानस्तरको ए लेभलको परीक्षा विनै नतिजा प्रकाशित गरिसकेको प्रमाण हाम्रोसामु छ। त्यसैले पनि यो कठिन अवस्थामा परीक्षाको रटान लगाउनु तर्कपूर्ण देखिन्न।
किन पनि भने, अरू देशका समान उमेरका विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पुग्दा नेपाली विद्यार्थी भने त्यही कक्षामा बसिरहनुले उनीहरूको मनोविज्ञानमा समेत नराम्रो असर गर्नेछ। यसबाट प्रतिस्पर्धा गर्न तयार विद्यार्थी पछिपर्ने जोखिम बढ्नेछ।
कोरोना कहरको यो समयमा एक किसिमको नतिजा प्राप्त गर्न सके विद्यार्थीले आगामी कक्षाका लागि पाठ्यपुस्तक र सम्बन्धित क्षेत्रका विषयवस्तु बारे खोजीनिती गर्नेछन्। बन्द कोठामा अलमलिएर बस्न विवश विद्यार्थी भविष्यका लागि थप योजना बनाउन थाल्नेछन्।
यसैले यो महत्वपूर्ण समयमा अनेक जोखाना हेरेर बस्नुभन्दा आन्तरिक मूल्याङ्कनका स्पष्ट आधार निर्माण गरी परीक्षा र नतिजा प्रकाशित गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन।
भुसाल मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हुन्।